KAREN NATIONAL LEAGUE (JAPAN): ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးမှာအမျိုးသမီးငယ်လေးကို မတော်မတရားပြုကျင့်
သင်္ကြန်အကျနေ့က အူအတက်ပေါက်လို့ ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးမှာ လာရောက်ဆေးကုသမှုခံတဲ့ အသက်နှစ်ဆယ်ဝန်းကျင်ရှိအမျိုးသမီးတစ်ဦးကို ဆေးရုံဝန်ထမ်းတွေဖြစ်ကြတဲ့ ဇော်သက်နဲ့ ခင်မြင့်ဆိုတဲ့သူတို့နှစ်ဦးဟာ အဲဒီအမျိုးသမီးငယ်လေးကို မတော်မတရားပြုကျင့်ကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အဲဒီကိစ္စနဲ့ပက်သက်ပြီး ဆေးရုံတာဝန်ရှိသူတွေက အမျိုးသမီးငယ်လေးအတွက် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးမယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။ အဲဒီအမျိုးသမီးငယ်ကို ဆရာ၊ဆရာမတွေနဲ့နီးတဲ့ အခန်းကိုပြောင်းရွေ့ထားပြီး တာဝန်ရှိသူမှ အပ အခြားဘယ်သူ့ကိုမှ သွားလာခွင့်မပြုဘူးလို့သိရှိရပါတယ်။ ကျူးလွန်ခဲ့ကြတဲ့ ဇော်သက်နဲ့ ခင်မြင့်ဆိုသူနှစ်ဦးကို အလုပ်မှထုတ်လိုက်ပြီလို့လဲဆိုပါတယ်။ လွန်ခဲ့နှစ်လလောက်ကလဲ ဘိုကလေးကနေ ဆေးရုံလာတက်သူ ဆင်းရဲနွမ်းပါးတဲ့ လူနာကို ခွဲစိတ်မှုမပြုခင် ငွေကျပ်သုံးသောင်းတောင်းလို့ လူနာရှင်ဘက်က အဲဒီငွေကျပ်သုံးသောင်းမပေးနိုင်တာကြောင့် ဆေးကုသမှုမခံယူတော့ဘဲ ဆေးရုံက ပြန်ဆင်းသွားတယ်လို့ ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးနဲ့ နီးစပ်သူတဦးက BurmaVJ ကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 6:36 PM
လယ်သိမ်းမယ်၊ အိမ်ကိုဝရမ်းကပ်မယ်၊ လူကို ထောင်ချမယ်၊...
မူးယစ်ရာဇာ နော်ခမ်းကို ပစ်ခတ်ဖမ်းဆီး
Local KNLA meet with Burmese Army 11 April 2012 က...
Interview with AKO Part 3
Interview with AKO Part-2
Interview with AKO Part-1
ကရင်ဘာသာ ရုပ်သံသတင်း (ဧပြီလ စတုတ္ထပတ်)
မြန်မာပြည်ဟာ ၀ိုင်းဆွဲဖဲ့စားခံရမယ့် အသားတုံးမဖြစ်ေ...
ဘယ်သူ အပျိုစစ်ပါသလဲ ???
ပြည်ထောင်စုအဆင့်အဖွဲ့များ - 24.04.2012
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် သတင်း 24.04.2012
VOA TV (25-4-2012)
RFA TV April 25, 2012
DVB 25 April 2012 - 4pm News
UNFC တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်များ ဂျပန်ခရီးစဉ် ရုပ...
ဦးတင်ဦး ညောင်တုန်း NLD ရုံးဖွှင့်ပွဲ သွားရောက်
နေ့စား အလုပ်သမငယ် နှစ်ဦးကို ဗလက်ကာရပြုကျင့်သူ သစ်...
ဒီလိုကားပိုင်ရှင်တွေဟာ တရားဥပဒေ အထက်ကလူတွေဖြစ်ရမယ်...
မူးယစ်ရာဇာ ၂၀ ကျော် ထိုင်းတွင် ဆုငွေထုတ်၊ မြန်မာ ၃...
အိမ်ဖော်ကို သတ်ရန်ကြိုးစားမှုဖြင့် ထောင်ဒဏ်ကျခံရသော...
EU Foreign Affairs Council Burma-Myanmar 23. April...
Mr. Ban Ki-moon, Secretary-General of the United N...
Corruption:Kayan’s Immigration’s Stuff-mp4
UNFC don't agree with peace process of Government ...
ဗိုလ်နှုတ်ခမ်းမွေးကို မူးယစ်ဆေးမှုဖြင့် ထိုင်းက ဆုငေ...
ုKNL-JAPAN၏ 2007 ခုနှစ် လုပ်ရှားမှု့တချို့မှတ်တမ်း...
KNL-JAPAN၏ 2006 ခုနှစ် လုပ်ရှားမှု့တချို့မှတ်တမ်...
ကျမ်းသစ္စာ ကျိန်ဆိုသော စကားရပ် ပြင်ဆင်ပေးရန် အစီအစဥ...
DVB သတင်းထောက်၏ လွှတ်တော်သတင်း (ရုပ်သံ)
ကမ္ဘာ့လူငယ်အဖွဲ့ ချူပ် ဒုဥက္ကဌ နော်မေဘယ်လ်ထူးကိုရွေး...
Naw Maybel Htoo-Vice-President of International Un...
Statement 12th anniversayry Migrant Karen Labour U...
April 24, 2012 knl japan news2006 8 15
ဘာလိုလိုနှင့်SAW MU NAR LAY KNL (JAPAN) ဆုံးတာ (6...
April 24, 2012 2006/7/17 2006 ခုနှစ်အမှတ်တရများ...
ခြေထောက် ၃ ချောင်းနဲ့ ပြည့်တန်ဆာမ
Karen Newsletter _March -2012_
မလေးနယ်စပ်မှ မြန်မာ ၂ ဦး အချုပ်ကားအတွင်း သေဆုံး.....
ဂျပန်နိုင်ငံသို့ ပေးရန် ကြွေးမြီ ၃.၇၂ ဘီလျံလျှော်ြ...
သည် အမျိုးသမီး (မြန်မာ စာတန်းထိုးပါသည်) လင့်သွားစရ...
မြန်မာ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် နှင့် ဂျပန် ဧကရာဇ် တွေ့ ဆ...
ဂျပန် ဧကရာဇ်လက်ဘက်ရည်ပွဲ သမ္မတဦးသိန်းစိန်တက်ရောက်
Japan forgives Myanmar debt
အငြိမ်းစားမြို့ နယ်မှူးသားဖြစ်သူမှ ဥပဒေမဲ့ပြုမူခြင...
ကျောက်ကြီးမြို့ KNU ဆက်ဆံရေးရုံး အကြောင်းသိကောင်းစ...
KNL japan ( 30-9-2007 )အမှတ်တရဓါတ်ပုံများ
အမှတ်တရများ 2007/12/20karen in japan
အမှတ်တရများ KNL japan 8-10-2007 ဂျပန်သတင်းထောက် န...